Iibhari eziphefumlelwe ziincwadi nababhali | Uncwadi lwangoku
Iibhari eziphefumlelwe ziincwadi kunye nababhali
Uninzi lwethu oluthandayo uncwadi kwaye lonwabele incwadi ezandleni zethu luye lwacinga ngaxa lithile ebomini bethu ukuba singonwaba njani ukuba besinokufumana umsebenzi, nokuba siziqeshile okanye uqeshiwe, ebenolwalamano oluthile neli hlabathi: iivenkile ezithengisa iincwadi, abapapashi, iimagazini, ... Kodwa eyona nto ingangcono, kukwenza ishishini lethu libe ibha okanye indawo ephefumlelwe yincwadi yethu esiyithandayo okanye umbhali. Yiloo nto esiza kuthetha nawe ngayo namhlanje, malunga nayo imivalo ephefumlelwe ziincwadi nababhali kwiindawo ezahlukeneyo zejografi.
Eminye imimangaliso yokwenene, ngaba uyafuna ukuyazi?
1 Ibha yeBukowski eAmsterdam, Holland
2 Ikhefi Kafka e-Barcelona, ​​eSpain
3 IGreen Dragon Bar kwiHinuera, eNew Zealand
4 ILlamas Bar eHelsinki, eFinland
5 Ikhefi Cortázar eBuenos Aires, eArgentina
Ibha yeBukowski eAmsterdam, Holland
Andazi ukuba kutheni ingandothusi into yokuba ibhari ibizwa ngegama lombhali, uBukowski. Kwaye ayothusi into yokuba le bar ibekwe eAmsterdam, Holland. Kule bar unokufumana konke oku:
Iingoma ezibhaliweyo ezinzulwini zobusuku.
Ubunzulu be iiposta kunye neencwadana ezinemifanekiso ezithetha ngazo zonke iintlobo zokundwendwela kunye nemisitho yenkcubeko, ngakumbi ezo zinxulumene noncwadi kunye nomculo.
Isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye utywala obuninzi ukuqala ezinzulwini zobusuku.
Ngokwewebhusayithi yabo, u-Bar Bukowski uphefumlelwe luthando umbhali aluva ngotywala, abasetyhini kunye noncwadi. Nkqu kwimenyu unokufumana iikowuti ezivela kumbhali, kunye nesiqubulo sakhe, esibhalwe kolunye lweendonga. "Kuhlala kunesizathu sokusela."
Ikhefi Kafka e-Barcelona, ​​eSpain
Yindawo ekuhlaleni kufuphi neBarceloneta Kwaye nangona igama layo libonisa ukuba yindawo yokutyela, enyanisweni, ungaya apho kungekuphela ukuba ube nee-coffees kodwa kunye neemenyu kunye neziselo ebusuku, kuba ineendawo ezininzi ezidibanisayo. Kunye umoya we-retro-chic ngokupheleleyo, I-Café Kafka iyakhohlisa kwaye ihanjelwa ngabantu abaninzi mihla le kuhle ukusuka kwisixeko saseBarcelona.
IGreen Dragon Bar kwiHinuera, eNew Zealand
Oyintanda yam ngaphandle kwamathandabuzo kuzo zonke endizibeke apha! Ukuba ufuna indawo ekuhambisa ngokupheleleyo kubume beencwadi ze INkosi yeRings, kufuneka undwendwele le ndawo. Zonke zenziwe nge ukhuni olungqingqwa, uhlobo lwerustic… Iyamangalisa!
Ukuba ungumthandi wesaga, nokuba ziincwadi, iimuvi okanye zombini, kwaye undwendwela iNew Zealand, le ndawo kwaye le dolophu kufuneka ikwincwadana yokubhalela.
ILlamas Bar eHelsinki, eFinland
Ukuba ufuna ukufaka ibar apho Utywala lubalasele, i imibala eqaqambileyo Zikhona kwinto nganye yokuhombisa eziyenzayo kunye neenkwenkwezi zayo eziphambili Frida KahloUya kuyithanda le bar kangangokuba iya kukwenza ufune ukuhlala kwaye uhlale apho.
Ukusuka kwiifoto kujongeka ngathi yibhara entle kakhulu kwaye iyathandeka.
Ikhefi Cortázar eBuenos Aires, eArgentina
Ibhar entsha phantse, ukusukela Kuvulwe ngaphezulu nje konyaka. Kwiindonga zayo siyayibona i- amaqweqwe eencwadi zakhe, amabinzana kunye neengcaphuno ezathethwa ngumbhali kunye nezinto ezininzi Iifoto eyathathwa eArgentina nakwezinye iindawo zehlabathi.
Ikonsathi zeJazz kunye nemiboniso ibanjelwe kule ndawo. Ukuhonjiswa kwayo kunika imeko entle kuyo kuba iitafile zayo ziindlela zaseParis kwaye yindawo entle kakhulu.
Kwaye, ngowuphi umbhali onokuyisekela ibha yakho okanye indawo? Mhlawumbi ngenye yeencwadi zakho ozithandayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iibhari eziphefumlelwe ziincwadi kunye nababhali
Iincwadi ezi-5 zekhulu leminyaka leRussian Revolution. Ukuvavanywa kunye nohlalutyo
Ithala leencwadi iBeinecke yeencwadi ezinqabileyo kunye neMibhalo-ngqangi